Hoplit Nwụrụ Anwụ Site n'ehihie mbanye anataghị ikike ats Ndị aghụghọ, Aimbot, ESP, Wallhack - Gamepron
Ihere Nwụrụ Anwụ Site Day Hack
Iji anyị Nwụrụ Anwụ site Daylight Hoplit mbanye anataghị ikike bụ ihe kasị mma nhọrọ gburugburu!
Chekwa oge dị ka ịchọrọ ebe a na Gamepron - Keyzụta Igodo nke Ngwaahịa Taa!
Mbanye anataghị ikike maka izu zuru ezu mgbe ị na-egwu egwu Nwụrụ Anwụ Site n'ehihie! - Zụta Igodo Ngwaahịa Izu 1 Taa
Chọrọ ike dị ka inwere ike iji aka gị na DBD - Purzụta Igodo nke ọnwa 1 Taa!
Enwere otutu ndi nwuru anwu site na ihe ndi ozo nke choro igbanwe uzo igwu egwu, mana naanị GamePron ga-eweta nkwa ahu. Ga-enwe mmeri karịa mgbe ọ bụla, ma ị bụ Killer ma ọ bụ Onye lanarịrị!
Nwụrụ Anwụ Site Day Hoplit mbanye anataghị ikike Ozi
Nwụrụ Anwụ Site n'ehihie bụ egwuregwu zuru oke maka ndị na-anụ ọkụ n'obi na onye ọ bụla nwere mmasị na mmetụta nke obi ha na-awụli n'ime akpịrị ha. Ezubere iji mee ka ị maa jijiji n'ụjọ mgbe ị na-egwu egwu, Nwụrụ Anwụ Site n'ehihie bụ egwuregwu zuru oke iji mbanye anataghị ikike, ebe enwere ọtụtụ uru ị ga-enwe! Ndị egwuregwu ndị ọzọ ga-akụchi isi ha ma na-eche etu ị siri jisie ike gbuo otu egwuregwu, ma ọ bụ ma eleghị anya Onye na-egbu egbu na-eche etu ị siri bụrụ ihe siri ike. Iji anyi Nwụrụ Anwụ Site Daylight Hoplit Hack bụ ụzọ dị mfe iji “nweta ezigbo”!
Atụmatụ ndị dị n'ime DBD Hack dị n'ụba, ebe ị ga-ahụ ngwaọrụ ọdịnala dịka Killer ESP, Survivor ESP / Distance, na onye iro Ozi ESP (dị ka Ogwe ahụike ahụike, Hatch ESP / status, Totems ESP./status, na Generator ESP / Ọnọdụ). Easy Skill Checks na No Takedown Mod mee ka anya dị ka nke ọma!
Ogologo egbu egbu
Onye lanarịrị ESP
Acha Health ọnọdụ
Chụ ESP, Ọnọdụ ọnọdụ
Ihe niile ESP
Gburugburu ebe obibi (ọnyà, pallets, igbe)
Nyocha dị mfe
Ọ dịghị takedown mod
Ihe Nwụrụ Anwụ Site Daylight Hoplit mbanye anataghị ikike
Nwụrụ Anwụ Site Daylight Hoplit Hack bụ nke nwere ike ịdaba maka ndị bịara ọhụụ na ndị nwere ọfụma nwere nsogbu, ebe ọ gụnyere atụmatụ niile dị mkpa iji nwee ọganiihu na gburugburu ebe obibi ọ bụla. Ọ baghị uru ma ọ bụrụ na ị bụ Onye na-egbu egbu ma ọ bụ Onye lanarịrị, ebe ọtụtụ atụmatụ nwere ike inyere gị aka imeri na ọnọdụ abụọ ahụ. Ga na-akwa Onye na-egbu gị ahụhụ dị ka onye na-agba ọsọ, na-echigharị na ndị na-enye ọkụ, ma gbapụ ka ịchọrọ; niile ị na-eme bụ rụọ ọrụ anyị kpakpando nwụrụ anwụ Site Day Hoplit mbanye anataghị ikike! Ọ bụ ezie na mbanye anataghị ikike a na-abịa HWID Kpọchiri Akpọchi, ị nwere ike ịzụta HWID Spoofer ebe a na Gamepron - ọ bụkwa Nvidia na AMD kwadoro!
Kedu ihe iji eji Nwụrụ Anwụ Site n'ehihie Hoplit mbanye anataghị ikike karịa ndị ọzọ na-enye ọrụ?
Ndị ọzọ na-enye ọrụ anaghị eche banyere ahụmịhe gị na ngwa ọrụ ha, ebe ha anaghị echegbu onwe ha banyere nyocha ndị ọrụ. Ozugbo ha nwetere ego gị, azụmahịa ahụ gafere ha - nsogbu bụ na ha agaghị emelite ngwaọrụ ha wepụtara, ị ga-ahapụ iji ihe ha nyere gị. N'ebe a na Gamepron, anyị na-agbasi mbọ ike iji nweta ịdị ukwuu. Anyị na-na-na-emelite anyị ngwaọrụ iji hụ na ha na-n'elu nke akara, na anyị DBD Hoplit mbanye anataghị ikike sokwa! Ọ bụrụ n’ịchọrọ inweta DBD dị elu na-enweghị mgbari, Gamepron bụ onye na - eweta gị ezigbo ego n’enweghị mgbagha.
Olee otu ị ga-esi atụ anya ịnọ na-asọ mpi n'egwuregwu "ọsụsọ" dị otú ahụ? Ehe, ị nwere ike ịtụkwasị obi na nchịkọta egwuregwu egwuregwu anyị iji tinye gị n'ọnọdụ kachasị mma. Ozugbo ị mụtara otu esi eji usoro ihe omume anyị egwu egwu (nke a kwụ ọtọ), ị ga-enwe ike ịhazigharị ntọala Nwụrụ Anwụ Nwụrụ Anwụ Site Daylight Hoplit Hack mgbe ọ bụla ịchọrọ. Nke a pụtara na ị nwere ike ịgbanwe mgbado anya nke DBD Aimbot ma ọ bụ Wallhack gị, yana hazie ntọala ndị ọzọ dị mkpa metụtara cheat na-enweghị imechi egwuregwu ahụ! Ọ bụrụ na ị na-eche na-achọsi ike maka DBD mbanye anataghị ikike ị nwere ike ịtụkwasị obi, nchere ahụ mechara.
A5. Mba, aghụghọ a anaghị agụnye spoofer hwid. Anyị na-enye hwid spoofer dị iche iche maka DBD.
Anyị na-emelite ngwaọrụ anyị oge niile iji hụ na ndị ọrụ na-enweta ahụmịhe kachasị mma, nke bụ ihe ndị ọzọ na-enye ha anaghị eme onwe ha. Nke a bụ ihe na-eme GamePron dị ukwuu!
Chebe onwe gị igodo ngwaahịa ma nweta ohere nke Ndị Nwụrụ Anwụ site na Daylight Hoplit Hack taa!
Njikere Na-achị na anyị Nwụrụ Anwụ Site Daylight Hoplit mbanye anataghị ikike?